Indlu eyakhiwe ngamapulangwe eseceleni komfula e-Hungerford - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe eseceleni komfula e-Hungerford
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Hilary
Ikhabethe eliwubukhazikhazi endaweni eseceleni enompheme ozimele ukuze uhlale futhi ubukele izinhlanzi zibhukuda eduze kwazo. Iqokwe ngokunethezeka negumbi lokugezela le-en suite kanye nokufudumeza kwangaphansi. Ngaphakathi kwebanga elilula lokuhamba enkabeni yedolobha eliyingqayizivele lemakethe yasemakhaya i-Hungerford. Itshe eliyigugu elifihliwe.
Le khabhinethi engama-hexagonal itholakala ekugcineni kwengadi yethu endaweni eseceleni futhi enokuthula. Ikhabethe linendawo yokulala engamamitha-skwele angama-25 enophahla oluvalekile kanye negumbi lokugezela le-en suite. Lesi sikhala sibekwe kahle sinombhede we-King size, usofa, izihlalo ezilula, ukufudumeza okungaphansi, i-tv, umshini wekhofi kanye ne-wifi yamahhala. Ngaphandle kunedekhi yangasese ebheke emfuleni lapho ongakwazi khona ukuhlala ubheke ama-kingfisher.
IHungerford iyidolobha lezimakethe elincane nelinobungani elinomlando omningi othokozisayo walabo abathambekele kangaka. Izuza ekuhambeni okuthandekayo futhi indawo yayo evamile evulekile iyikhaya lezilwane eziningi zasendle ezithokozisayo, izilwane nezitshalo. Zinike isikhathi sokuvakashela inqwaba yezitolo zakudala futhi uzame imali yokugibela ezindaweni zokudlela ezinhle kakhulu edolobheni. Kulabo abathanda ukushisa amandla engeziwe, miningi imizila emihle kakhulu yokuhamba nangaphandle komgwaqo abangayizama - vele usibuze futhi singancoma okuthile okulingana nesikweletu. Sikwazi nokufinyelela kahle ezindleleni zezinyawo ezimbili ezaziwayo zebanga elide, i-Ridgeway engamamayela angu-10 ukuya enyakatho kanye ne-Wayfarer's Walk, amamayela angu-5 ukuya eningizimu.
Richard, daughter Chloe and I are lucky to live in a beautiful area in the lovely, friendly market town of Hungerford. We enjoy the outdoors, whether on a bicycle or…
Ubumfihlo bezihambeli bubalulekile kodwa sihlala sitholakala ku-natter noma njengomthombo wolwazi lwendawo. Ukuzikhethela kungokwakho.